Soo kabashada Cusub ee Dalxiiska Talyaaniga ilaa 1 Bilyan oo Yuuro
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Soo kabashada Cusub ee Dalxiiska Talyaaniga ilaa 1 Bilyan oo Yuuro
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
1 Bilyan oo Yuuro oo loogu talagalay Soo kabashada Dalxiiska Talyaaniga
Kooxda bangiyada caalamiga ah ee Talyaaniga ee Intesa Sanpaolo ayaa samaysay 1 bilyan oo Yuuro si ay u taageeraan soo kabashada ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee qaybta dalxiiska. Waxay dhiirigelinaysaa maal-gashiga u socda jihada dalxiiska waara, iyadoo la raacayo waddada Qorshaha Soo-kabashada iyo Dib-u-soo-kabashada Qaranka (PNRR).
Hindisaha, iyadoo lala kaashanayo Sace, oo ah hay'ad dawladeed oo ka shaqeysa caalamiyeynta shirkadaha, waa faragelinta tooska ah ee ugu horreysa SMEs (shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah) qaybta iyada oo qayb ka ah barnaamijka istaraatiijiyadeed ee matoorka Talyaaniga. Qorshaha maalgashiga ee machadka amaahda, wuxuu bixiyaa bixinta kheyraad dheeraad ah oo dhan 120 bilyan, sanadkan la bilaabay saqafka 50 bilyan, kaas oo lagu kabi doono lacagaha ay bixiso NRP ee dib u soo celinta dalka. Gaar ahaan waaxaha digitization, kala-guurka deegaanka, dhaqdhaqaaqa waara, waxbarashada iyo cilmi-baarista, ka mid noqoshada iyo isku-duubnida, iyo caafimaadka ayaa diiradda lagu saarayaa.
Waxqabadyada taageerada ee ay ku dhawaaqeen kooxda bangiyada ee uu hogaamiyo Carlo Messina waxay maalgelin doonaan SME-yada qaybta inta badan 3 qaybood: cusboonaysiinta iyo kordhinta heerarka tayada xarumaha hoyga, sii jirista deegaanka ee bixinta, iyo digitalization. Tallaabooyinka lagu bixiyay sharciga 43 ee la xiriira cabbiraadaha Dalxiiska PNRR ayaa sidoo kale lagu dari doonaa hindisaha.
Waxaa jira 2 xal maalgelineed oo lagu fikiray macnaha guud. Midda kowaad waa Suite Loan, oo loogu talagalay shirkadaha dalxiiska ee raba inay hiigsadaan tayada xarunta hoygooda. Midda labaad waa S-Loan Turismo, oo loogu talagalay dhiirigelinta maalgashiga loogu talagalay dib-u-hormarinta iyo tamarta tas-hiilaadka hoteelada.
Horeba inta lagu gudajiray 2020, Intesa Sanpaolo waxay taageertay shirkadaha dalxiiska iyadoo dhaqaajisay joojinta 70,000 oo amaah ah oo qiimaheedu dhan yahay 8 bilyan iyo bixinta balaayiin maaliyadeed oo cusub iyada oo loo marayo alaabooyin gaar ah.
“Dalxiiska lama huraan wuxuu ahaa mid ka mid ah waaxyaha sida aadka ah u faafay. Isla bilawgiiba, waxa aanu bixinay taageeradayada annagoo diyaarinayna 2 bilyan oo Yuuro si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee shirkadaha,” ayuu yidhi Stefano Barrese, madaxa Bangiga ee Qaybta Territories ee Machadka.
Dareen-celinta togan ee hindisaha ayaa sidoo kale ay diiwaangeliyeen wakiillo ka socda waaxda dalxiiska. "Faragelinta cusub ee ay ku dhawaaqday Intesa Sanpaolo waxay u oggolaan doontaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee qaybta dalxiiska inay la socdaan isbeddelka. Waxaan u mahadcelineynaa rabitaanka Intesa Sanpaolo ee ah inay taageerto dib u habeynta hoteellada Talyaaniga,” ayuu iftiimiyay Madaxweynaha Federaalka Bernabò Bocca.
Sida laga soo xigtay Maria Carmela Coliacovo, Madaxa Ururka Talyaaniga ee Confindustria Hotels, "Xirmada wax ka qabadka ee la aqoonsaday ayaa si aad u wanaagsan loogu habeeyey qaybta."
"Taageerada qaybta isboortiga [sidoo kale] waxay ka timaadaa Intesa Sanpaolo," ayuu raaciyay Massimo Caputi, Madaxweynaha Federterme Confindustria.